Video:-Khayre oo maanta booqday ciidamada xasilinta xamar – Idil News
Video:-Khayre oo maanta booqday ciidamada xasilinta xamar
Ra’isul wasaraha xukumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo ay wehliyaan xildhibaano ka tirsan barlamaanka , wasiirka xanaanadda xoolaha iyo sarakiil ka tirsan ciidanka ayaa booqasho ugu ugu tagay qaar ka mid ah ciidanka howlgalka xaslinta Cassimadda.
Xildhibaan Cabdifirax Qaasim Maxamud oo ka mid ah xubnah dhalinyaradda ah ee ku jira golaha Shacabka ayaa u sheegay ciidanka in aan dalka loo ogolaanin kuwa burburintiisa ka shaqeynaya, isagoo xusay in golaha shacabku ay ku garan taagan yihiin dadaalada ay waddo xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan xasilinta dalka.
“Ra’iisul wasaaraha Mukeyf saaxiib lama ahan ee nolashada aad ku nooshiyiin ayuu rabaa in uu idin kula noolaado, waxa aad adinka qabtaan ayuu idin la qabaa anaga middaas ayaa ku taageereynaa,” ayuu yiri Qaasim.
Ra’isul waaraha xukumadda federaalka Soomaaliya ayaa xusay in rajada umadda Soomaaliyeed ay yihiin ciidanka isla markaana amni la’aan wax la sameyn karo ama la gaari karo aysan jirin.
“Sababta aan idin kugu yimid waa in aan idin kaga tacsiyeeyo dhibkii idin ku dhacay, aan idin sheego sababta hal bil ka badan uu qarax ugu dhicin sababta ay u yeraatay dadkii la leyn jirey sababta amni iyo kala dambeyn u bilowday in uu magaaladan ku soo laabto- waa shaqadii adinka aad qabateen,” ayuu yiri RW Kheyre.
Mudane Xasan Cali khayre ayaa ciidanka ku booriyey in ay laban labaan dagaalka ay kula jiraan cadowga nabad diidka ee Alshabab isla markaana dadka shacab ah ula dhaqmaan si sharaf iyo karaamo.
“Halyeeyada dalka ayaa tihiin haddaad adinka tihiin dadka la fiirsanayay qalbigiinu waa in uu ahaado bir, shacabka marka aad la dhaqmeysaan waa in aad sharaf iyo wanaag tustaan, Al-shabaab marka aad la dhaqmeysaana bir iyo calool adeeg in aad tustaan waaye, waa in aad u dagaalantaan sidii in aad gumeysi ka xoreynaysaan dalka, Al-shabab waa cadow,” ayuu hadlkiisa ku daray RW.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa tilmaamay in ay Al-shabaab ay yihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed maadaama aysan kala sooceynin oo isku si u dilaan marka ay weerar ku qaadaan goobaha dadweynaha u badan yahay sida Hotelada oo kale,hoos ka daawo muuqaalka.